Enveloppete aannohunna galagale higate teessosi eessi. Qolteno teessote bare daatabeezenni surka dandaatto, lawishshu gedera Teessote daatabeezinni.
Surkate hasiroottoha teesso daata amadino daatabeeze doori.
Surkate hasiroottoha teesso daata amadino daatabeeze shae doori.
surkate hasiroottoha teesso daata amadino daatabeeze bare doori, aanchite guraayidi worbichi ilka qiphisi. Wirsa amaddino daatu teessote saaxinera ledamanno.